Löfven oo shir jaraa'id qaban doona lixda galabnimo ee maanta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Löfven oo shir jaraa'id qaban doona lixda galabnimo ee maanta
La daabacay tisdag 2 december 2014 kl 17.34
Anna Kinberg Batra, af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga Modaraterna oo ka faallootay go'aankii SD eey ku sheegeen iney codkooda siin doonaan miisaaniyadda xisbiyada mucaaradka ee garabka midig:
- Cidda maanta looga fadhiyo inay ka faalooto habka dalka loo maamuli doono waa Stefan Löfven, maadaama uu masuuliyaddeeda leeyahay miisaaniyadda dawladdiisa. Waa mid aan sidoo kale ku celineeyno sidii uu xisbiga Socialdemokraterna horey noogu oran jiray xilligii aan awoodda gacanta ku hayney in masuuliyadda miisaaniyaddu saaran tahay dawladda oo aaney ahayn in mucaaradku ka caawiyo miisaaniyadda dawladdu sidii ey ku mari lahayd.
Xisbiga Moderaterna diyaar ma u yahay inuu awoodda la wareego?
- Kubbaddu waxay iminka la taal Stefan Löfven. Sidoo kale waxaan og-soonnahey in doodda miisaaniyaddu aanay ka horreeyn berito. Ma aanay bilaaban, welina go'aan lagama gaarin.
Annie Lööf, hoggaamiyaha xisbiga Dhexe (Center-ka) ayaa sheegtay mar ay u warrameeysay idaacadda Iswiidhen - SR, in masuuliyadda miisaaniyaddu ay saaran tahay madaxa dawladda Stefan Löfven. Waana mid Löfven u taala sidii uu xal uga keeni lahaa xaaladda uu dalku ku sugan yahay. Waa mid uu dastuurku xaq u siiinayo inuu xal ka keeno xaaladdaa.
Lööf ayaa sidoo kale sheegtay in aanu xisbigeeda iyo garabka midig oo xisbigeedu ka tir-san yahay aannu diyaar u ahayn iney la xaajoodaan xisbiga Sverigedemokraterna.
Hoggaamiyaha xisbiga Bidixda - Vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt oo oo faallo ka bixiyay dabdeed shirkii jar'aaid oo ay qabteen xubnaha xisbiga SD ayaa sheegay in xisbiga SD uu weligiiba ku hamiyio jiray sidii uu carqalad u gelin lahaa siyaasadda dalka. - Waa dharbaaxo si cad loola beegtay waayeelka howl-gabka ee dalka ku dhaqan, sida uu sheegay Jonas Sjöstedt.